ကျွန်စနစ် - Timothée de Fombelle:“ သတ္တဝါတိုင်းသည်သူ၏ဘဝတစ်လျှောက်လုံးပျက်စီးသွားကြသည်။ "- Jeune Afrique - TELES RELAY
"Alma, le vent se lève" တွင်ပြင်သစ်ဝတ္ထုရေးဆရာသည်ကျွန်စနစ်၏သမိုင်းကိုမြှင့်တင်ပေးသည့်အစီအစဉ်၏ပထမအပိုင်းကိုပေးသည်။
စာရေးဆရာ Tobie Lolnessမျက်မှောက်ခေတ်ကမ္ဘာနှင့် ပတ်သက်၍ ဂေဟဗေဒနှင့်ကဗျာဆန်ဆန်ပုံဥပမာဖြစ်သောTimothée de Fombelle သည် Oko လူငယ်တစ် ဦး ၏စွန့်စားခန်းအသစ်တွင်ကျွန်ကုန်သည်များ၊ ပြင်သစ်စွန့် ဦး တီထွင်သူကျွန်ကုန်သည်များကပြန်ပေးဆွဲသည် ကျွန်သင်္ဘောတစ်စင်းနှင့်အခြားဇာတ်ကောင်များ။ အစွမ်းထက်သော verve ပါ ၀ င်သော trilogy ၏ပထမပိုင်းသည်စာရွက်စာတမ်းများပေါကြွယ်ဝပြီး၎င်းအားဖယ်ရှားပစ်သည့်အထိခိုက်မခံသောအရေးအသားဖြင့်သယ်ဆောင်ထားသည်။
Jeune Afrique: Almaမင်းစဖို့ကျွန်ဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုကသင်ဟာဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တုန်းကအာဖရိကမှာနေထိုင်ပြီးမွေးဖွားခဲ့တာပါ။
Timothéeက de Fombelle: ကျွန်ုပ်အသက် ၅ နှစ်အရွယ်တွင် Agadir ရှိမော်ရိုကိုတွင်တစ်နှစ်နေထိုင်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်အဖေကမြို့ပြစီမံကိန်းရေးဆွဲသူဖြစ်ပြီးဗိသုကာပညာရှင်တစ်ယောက်ပါ။ ဒီအချိန်ကာလဟာ ၁၄ ရာစုမှာပဲရစ်မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ငယ်ရွယ်တဲ့ပြင်သစ်လူမျိုးကိုကျွန်တော်ဟာတခြားနေရာကိုအထိခိုက်မခံတဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကိုခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်းအသက် ၁၃ နှစ်အရွယ်မှာ Ivory Coast မှာနှစ်နှစ်နေထိုင်ခဲ့တယ်။ အဖေ Atelier d'urbanisme d'Abidjan မှာအလုပ်လုပ်တယ်။ Jean-Mermoz ကောလိပ်မှာလူများစွာနဲ့တွေ့ဆုံနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါဟာရှာဖွေတွေ့ရှိမှု၏အလွန်ပြင်းထန်သောအခိုက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံငယ်လေးတစ်မျိုးမျိုးကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ကူးမရှိခဲ့ပါ။ Abidjan သည်မာလီနှင့်ဂါနာသို့လမ်းလျှောက်ရန်အစပြုခဲ့သည်။ ဒီနေ့အချိန်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအချိန်မီရှာဖွေရတဲ့အခါငါမှတ်မိသမျှအားလုံးဟာဒီအခိုက်အတန့်မှာတည်ဆောက်ထားတယ်ဆိုတာကိုငါသိတယ်။
အပြောင်းအလဲသည်အမြစ်နှုတ်၊ အခြားနေရာများနှင့်ဆက်စပ်သည်။ Abidjan မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရှာတွေ့ခဲ့တာကကျွန်တော်ဟာဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တုန်းကကျွန်တော့်ဘဝနဲ့အလွန်ကွဲပြားတဲ့ဘဝတွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိစေတဲ့အပြောင်းအလဲတစ်ခုပါ။ ငါ့ကိုပြောင်းလဲစေခဲ့တယ် ဒီခေတ်မှာငါတို့ပတ် ၀ န်းကျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအရမ်းကိုသိမ်မွေ့တဲ့ရေမြှုပ်ကောင်တွေဖြစ်ပြီးငါတို့မိဘတွေတောင်မှငါတို့ဖြတ်သန်းနေတဲ့အရာတွေရဲ့ပြင်းထန်မှုကိုမသိနိုင်ဘူး။ လူကြီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ထွက်သွားချင်ခဲ့တယ်။ ဗီယက်နမ်မှာငယ်ရွယ်တဲ့ဆရာတစ်ယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဟာအာရှမှာအာဖရိကကိုရှာနေတယ်ဆိုတာသိလိုက်ရတယ်။
သူတော်စင်အားလုံးအားလပ်ရက်များအတွင်း Mazda ဘူတာရုံရှိဂါနာသို့ကျွန်ုပ်တို့ထွက်ခွာခဲ့သည်။ ငါပြောခဲ့တဲ့ forts တစ်ခုလုံးကိုလည်ပတ်ခဲ့တယ် Alma: Elmina၊ Cape Coast၊ Shama ။ လည်ပင်းတစ်ဝိုက်တွင်ကျွန်ုပ်၏ကင်မရာဖြင့်ပင်လယ်ထဲသို့ကျသွားသောအဖြူရောင်ရဲတိုက်များသို့ရောက်သောအခါကျွန်ုပ်ဘာရှာတွေ့မည်ကိုမသိခဲ့ပါ။ ကျွန်ဘဝရဲ့ကြေကွဲဖွယ်အဖြစ်အပျက်ကိုငါကြားခဲ့ရမှာသေချာတယ်၊ အဲဒီမှာအစောင့်တစ်ယောက်ကအတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ကူးမလာခင်ထောင်ပေါင်းများစွာသောအာဖရိကန် - ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်ဖြတ်သန်းသွားခဲ့တဲ့ဒီနေရာမှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုတာကိုရှင်းပြခဲ့တယ်။ ခံတပ်၏မြေအောက်ခန်း၏မြေအောက်လွှာတွင်ဤအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ၏လမ်းကြောင်းကိုသဲလွန်စများကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာလွှမ်းမိုးသောဖြစ်ခဲ့သည်။
တွင် Alma, ဇာတ်ကောင်အတော်များများတူညီတဲ့လမ်းအတွက်အဖြစ်မှန်သတိထားဖြစ်လာသည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီအသွင်ပြောင်းမှုဟာကျွန်တော့်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသိအမြင်နဲ့အထူးသဖြင့်စာဖတ်သူတွေကိုကျွန်တော်ရယူချင်တဲ့လမ်းကြောင်းကမှုတ်သွင်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ လူအများအပြားကိုအခြားတိုက်ကြီးတစ်ခုသို့ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးခံရသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့လေ့လာနိုင်သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုဖြစ်လျက်ရှိ၎င်း၏ဘဝတစျခုလုံးနှင့်အတူပျက်စီးခဲ့သည်! ဒါကငါ Elmina သဘောပေါက်သောအရာကိုဖြစ်သည်။
Timothée de Fombelle မှ“ Alma, le vent se lève” ကို Gallimard Jeunesse မှ ၂၀၂၀၊ ၂၀၂၀ တွင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ©François Place / Gallimard jeunesse 11
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်စာရေးနေစဉ်စစ်တမ်းတစ်ခုလုပ်ပါတယ်။ အကြှနျုပျ၏စာရွက်စာတမ်းများကွဲပြားသည်။ ကျွန်ပ်သင်္ဘောများ၊ ပင်လယ်ဓားပြများနှင့်ပင်လယ်ရေကြောင်းသွားလာမှုဆိုင်ရာ Marcus Rediker ကဲ့သို့အတ္တလန္တိတ်ကျွန်ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့သိထားသည့်အရာများကိုအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားသည့်သမိုင်းစာအုပ်များရှိပါသည်။ သူသည်မျှတသောမာက်စ်ဝါဒီအမြင်ရှိသည်။ ဆယ်ခုနစ်ရာစုအတ္တလန္တိတ်နှင့်အရှိဆုံးချို့တဲ့စိတ်ဝင်စားသည်။ ငါ La Rochelle အတွက်လူကုန်ကူးမှုအပါအဝင်တ ဦး တည်းအပါအဝင်အလွန်တိကျတဲ့လေ့လာမှုများ, ဖတ်ပါ။ ပြီးတော့ BnF [ပြင်သစ်အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်] ၏အွန်လိုင်းစာကြည့်တိုက်ဖြစ်သောဂယ်လီကာအားကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်သင်္ဘော၏စာအုပ်များဖြစ်သောကုန်ကြမ်းစာရွက်စာတမ်းများကိုအသုံးပြုခွင့်ရခဲ့ပြီးကျွန်ကုန်သည်များမှသက်သေခံချက်အများစုမှာအလွန်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပါသည်။ ။
အထက်ကုန်းပတ်မှမဟုတ်ဘဲကိုင်ထားရာမှအမြင်ရှုထောင့်ပေးထားသော Olaudah Equiano ကဲ့သို့သောကျွန်ပုံပြင်များသည်အလွန်ရှားပါးသည်။ အချို့သောကျေးကျွန်များ၏ခရီးနှင့်ခရီးသွားခြင်းကိုဖော်ပြသည့်တရားရေးဆိုင်ရာသတင်းရင်းမြစ်မှသက်သေခံချက်အနည်းငယ်ရှိသည်။ သို့သော်၎င်းတို့ကိုတစ်ဖက်လက်ဖြင့်ရေတွက်။ စိုက်ခင်းများရှိသက်ရှိများနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုများပြားသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှေးဟောင်းအာဖရိကမှာမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်။ François-Xavier Fauvelle ရေးသားခဲ့သောစာအုပ်၏ကျေးဇူးကြောင့်အထူးသဖြင့်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းဤဒေသရှိသုတေသနလုပ်ငန်းများပိုမိုနက်ရှိုင်းလာခဲ့သည်။ ပြီးတော့ Buderiot လိုလူမိုက်တွေရဲ့လုပ်ရပ်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ သူကလှေပေါ်မှာလှေပေါ်မှာစာရေးခဲ့တယ် အရုဏ် ဦး!
ဤသူသည်သင်တို့ကိုမှုတ်သွင်းသောသူဖြစ်၏ ချိုမြိန် Amelie, သော Alma စတင် ...
ဟုတ်တယ်၊ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်၊ ၁၇၈၄ ခုနှစ်မှာထွက်ခဲ့တယ် ချိုမြိန် Amelie။ ကျွန်ုပ်သည်ဤသင်္ဘောနှင့်ကျွန်ုပ်၏ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်လမ်းလျှောက်ရန်ခွင့်ပြုနိုင်သော၎င်း၏ ၅၀ ပုံ (၆၀) ပုံရှိသည်။ အရုဏ် ဦး Rochefort, ကတည်ဆောက်ခဲ့ရှိရာဂန္ကူးဘို့, ထားခဲ့တယ်။ သူသည်ဆီနီဂေါသို့ရောက်ပြီးနောက်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်ကွန်ဂိုနိုင်ငံသို့ရွက်လွှင့်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်သူသည်အတ္တလန္တိတ်ကို Santo Domingo ဆီသို့, ထို့နောက်၎င်း၏ခမ်းနားထည်ဝါ၏အမြင့်မှာ။ သကြားထုတ်လုပ်မှုကိုခွင့်ပြုရန်ကျွန်ရောင်းဝယ်မှုသည်အထူးပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Alma သည် Oko လူမျိုး၏နောက်ဆုံးကိုယ်စားလှယ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီလူတွေတကယ်တည်ရှိခဲ့တာလား။
ဟင့်အင်းငါ့စိတ်ကူးရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါ ငါဒီလွတ်လပ်ခွင့်ကိုလိုအပ်တဲ့အစစ်အမှန်ကမ္ဘာမှာ Boussa၊ နိုင်ဂျီးရီးယားမြစ်၊ Ashantis နိုင်ငံတော်ကိုနှိုးဆွခြင်းဖြင့်ဖော်ပြခဲ့တယ်။ စာပေတွင်ပါ ၀ င်သောအကြောင်းအရာများကိုဖတ်ရင်းကျွန်ုပ်အလွန်ဆင်းရဲဒုက္ခခံခဲ့ရသည် - ငယ်ရွယ်သောသုံ့ပန်းဘဝ၏ပုံမှန်လမ်းကြောင်းများ ... "ကျွန်ဘဝအနေဖြင့်နေထိုင်ပါ" ဟူသောအမျိုးအစားတွင်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ်ကူးစိတ်သန်းဖြင့်၎င်းကိုထည့်သွင်းနိုင်သည့်အခါမှတ်ဉာဏ်တစ်ခုသည်စတင်ရှင်သန်လာသည်။ ဤသည်မှာသူအားကိုးကွယ်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က Okos ကိုတီထွင်ခဲ့တယ်။ စွမ်းအားနဲ့စွမ်းရည်တွေကိုလျှော့ချနိုင်တဲ့လူတွေအကြောင်းဒီစိတ်ကူးနဲ့ငါနီးစပ်လာအောင်လုပ်နိုင်တယ်။ သူတို့တွေဟာစူပါပါဝါတွေနီးပါးဝယ်နိုင်အောင်
ဒီနာမည်နဲ့ orisha ရှိတယ် ...
ဒီလူတွေဟာပေါင်းစည်းခြင်းမျိုး၊ ယဉ်ကျေးမှုအမျိုးမျိုးမှငှားရမ်းထားသောဒြပ်ထုအချို့မျှသာရှိသောကုဗအစုအဝေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါသဲကန္တာရမြို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖတ်ခဲ့တယ်။ ဘယ်သူ့ကြောင့်လဲ၊ ဘယ်မှာငါတို့တွေအိုးတွေတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိခဲ့ဘူး။ ကျွန်တော်ဒီလူတွေတီထွင်ခဲ့သည့်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောအရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ Oyo လူမျိုးရှိသော်လည်းအဆိုပါစကားလုံးသည်သင်္ချိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
သူမထိုင်ခုံမှာ Alma ရဲ့အစ်ကိုလက်အောက်မှာအပင်တွေကြီးထွားလာအောင်လုပ်နိုင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမြင်ကွင်းကကျွန်မကိုသယ်ဆောင်သွားလို့ပါ။ ဒါပေမယ့်ငါက Spider-Man စူပါပါဝါကိုသုံးမှာမဟုတ်ဘူး။ ငါဒီမှော်ကိုအာဖရိကဓလေ့ထုံးစံတွေ၊ သူမသီချင်းနှင့်သူမ၏ဇာတ်လမ်းနှင့်အတူသင်္ဘောကိုကိုင်ဆောင်ထားသည့် Alma ၏မိခင်ကသူမကိုမတီထွင်ခဲ့ပါ။ ကျွန်သင်္ဘောတစ်စင်းတွင်အမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်ညအချိန်တွင်သီချင်းဆိုရန်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်၊ ဒီအဖြစ်အပျက်ကကျွန်တော့်ကိုဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှအတိုင်းငါဘယ်တော့မှအသက်ရှင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်မြင်စေတယ်။
အားလုံးသမိုင်းပညာရှင်ကအကြောင်းပြောဆို။ ၁၈ ရာစုတွင်အနောက်တိုင်းသားများကြောက်။ စီးနင်းမှုမရှိခဲ့ပါ။ သူတို့သည်အလွန်အန္တရာယ်များသောအလုပ်ကို outsource လုပ်လိုကြသည်။ သို့မှသာ၎င်းတို့အခြေစိုက်စခန်းမှထွက်ခွာရန်နှင့်ညှိနှိုင်းရန်ပိုမိုနှစ်သက်သည့်အချိန်တွင်တိုက်ခိုက်ရန်လိုအပ်သည်။ In Almaလူတွေကိုမျိုချလိုက်တဲ့ဒီသင်္ဘောကုန်သွယ်ရေးနဲ့သင်္ဘောတွေ၊ သူတို့ရဲ့ပြတ်တောက်နေတဲ့ကြိုးတွေကြောင့်အာဖရိကကိုလုံးဝစနစ်တကျနဲ့ကုန်ခန်းသွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးငါပြသခဲ့တယ်။ ဤစက်မှုလုပ်ငန်းသည်ဥရောပရင်ပြင်နှင့်ဆင်ခြေဖုံးရှိကော်ဖီနှင့်သကြားကိုတမ်းတနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငါကညွှန်ကြားသောလက်နှင့်ပတ်သက်။ မှားမဟုတ်။ စာမျက်နှာ ၄၀၀ ရှိ volumes သုံးခုဖြင့်ဤဇာတ်လမ်း၏ရှုပ်ထွေးမှုကိုကျွန်ုပ်ပြနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ကုန်ကြမ်းသည်လူသားနှင့်လူတိုင်းအတွက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဥရောပ (သို့) အာဖရိကန်ကိုထောက်ခံသည်ဖြစ်စေငါသည်လည်းထိုနည်းတူပင်ပြုသည်။ ဇာတ်ကောင်တိုင်းမှာအသွင်သဏ္thousandာန်တထောင်စီရှိကြတယ်။ သူ့အားယုတ်ညံ့စေသောအားနည်းချက်ကိုမပြဘဲလူကြမ်းအဖြစ်မဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပါ။ သူတို့ကိုငါဆင်ခြေပေးဖို့မကြိုးစားဘူး၊ ငါ့ပုံတူပြခန်းမှာအမှိုက်သရိုက်အချို့ရှိတယ်။ - သို့သော်သူတို့သည်နဖူး၌“ ဆိုးညစ်သော” နိမိတ်လက္ခဏာဖြင့်သူတို့၏အမိဝမ်းထဲမှထွက်မလာခဲ့ပါ။
၎င်းသည်ဝံပုလွေနှင့်သိုးသငယ်ကိုဆန့်ကျင်သောထာဝရကာလအတ္ထုပ္ပတ္တိ၏ဂန္ထဝင်ရူပါရုံလည်းဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့်မှာဇာတ်လမ်းပြောသူအမှားဟောင်းတွေရှိနေပြီးအမှောင်ထုထဲမှာလူမဆန်စွာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုကြုံတွေ့နေရတယ်။ ကျနော်တို့တွေ့သောဆက်ဆံရေး၏ဤဒေါင်လိုက်အမြင် Tobie Lolness Jo Mitch, အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းရှင်ကြီးနှင့်အတူ, ဒါဟာဘဝ၏ရောင်ပြန်ဟပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
လူကုန်ကူးမှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်လူကြမ်းအဖြစ်၏ဇာတ်ကောင်ကိုတည်ဆောက်ရန်ကျွန်ုပ်သည်အခက်အခဲမရှိခဲ့ပါ။ သမိုင်း၌ဤအခိုက်အတန့်သည်လူသား၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကိုငြင်းပယ်သောကြောင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။ ပြီးတော့လူတိုင်းကအဲဒီကနေအကျိုးခံစားခဲ့ရတယ်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံ၏နက်နဲသောနေရာမှစားတော်ဝန်တစ် ဦး သည်သူ၏ဘီစကစ်များကိုလှေများပေါ်တွင်ပင်ရောင်းနိုင်ခဲ့သည်! ဥရောပတိုက်ကိုဤသို့တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
ဒုတိယကို Cap-Françaisမြို့၌စတင်ခဲ့ပြီး Santo Domingo နှင့် Louisiana တွင်စိုက်ခင်းဘက်ခြမ်းတွင်ပြုလုပ်သည်။ ဥရောပတိုက်တွင်လည်းအင်္ဂလန်နိုင်ငံ၌ဖျက်သိမ်းခြင်းကိုစတင်ခဲ့ပြီးအမှန်တကယ်တည်ရှိခဲ့သောဇာတ်ကောင်တစ် ဦး ဖြစ်သည့်သောမတ်စ်ကလပ်ဆင်သည်ကျွန်ဘဝမှလွတ်မြောက်ရေးအတွက်စတင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သည်။ ပြင်သစ်တော်လှန်ရေးမတိုင်မီဆောင်းရာသီတွင်အယ်လ်မာသည်ဗာဆိုင်းမြို့၌ထပ်မံတွေ့ဆုံမည်။ တတိယအတွဲသည် Santo Domingo ၏ကြီးမားသောပုန်ကန်မှုကိုအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မည်။ မအောင်မြင်သောဥရောပဖျက်သိမ်းရေးလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူကျွန်ုပ်သည်လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုနှင့်ကျွန်များမိမိကိုယ်ကိုလွတ်မြောက်ရန်ကြိုးစားသည့်အချိန်များနှင့်ဆက်ဆံလိုသည်။
Timothée de Fombelle မှ Alma စာအုပ်မှပြားတစ်ချပ်။ © Joel SAGET / AFP
သေးငယ်တဲ့အငြင်းပွားဖွယ်ရာထွက်ပေါက်မှာစာပေအသိုင်းအဝိုင်းလှုံ့ဆော်Alma ။ Timothée de Fombelle ၏အင်္ဂလိပ် - Saxon အယ်ဒီတာဖြစ်သည့် Walker Books သည်အဖြူရောင်ဖြင့်ရေးသားသူသည်လူမည်းကလေးငယ်၏အဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြရန်တရားဝင်မဟုတ်ကြောင်းဟန်ဆောင်။ ၎င်းကိုမထုတ်ဝေရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် ကျေးကျွန်။ ဤအတွေးအခေါ်မျိုးကိုအငြင်းအခုန်များသို့ဖိတ်ကြားခြင်းသည်ပထမဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ပါ။ ချွေးတပ်စခန်းမှလွတ်မြောက်လာသူအချို့သည်သူတို့၏ဇာတ်လမ်းသည်စိတ်ကူးစိတ်သန်းစာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်ရန်ငြင်းဆန်သည့်အချိန်ရှိခဲ့သည် ဒါပေမယ့်ဒီယုတ္တိဗေဒကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာမောင်းနှင်ခြင်းသည်စာပေအားလုံးကိုသေဒဏ်ပေးရန်ဖြစ်သည်။ ဗစ်တာဟူဂိုသည်နိဒါန်းတွင်ရေးခဲ့သည် တရားငါ့ကိုယ်ငါပြောတတ်တဲ့စာရေးဆရာတွေကိုငါတို့တစ်ခါတလေညည်းညူတယ်။ ငါတို့အကြောင်းကိုငါတို့အားပြောပါ၊ အို။ ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်သင်တို့ကိုပြောသောအခါ၊ မင်းဒါကိုမခံစားရဘူးလား အာ ငါမဟုတျ၊ "
ဆီနီဂေါ - Huawei နှင့်ယူနက်စကိုတို့သည် ၀ န်ကြီးဌာနအားကူညီသည်။
[Chronicle] အယ်လ်ဂျီးရီးယားတရားစီရင်ရေးစနစ်သည် Khaled ကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်။
ဘယ်လ်ဂျီယံ - မက်ဆီမီရော့ဘ်ပိုတို -“ ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးမှမရသေးဘူး။
အိန္ဒိယ - Rajasthan အကျပ်အတည်း - Jaipur သို့ Sachin Pilot ကမဖြစ်သင့်ဟုပြောသည်